Mgbanwe na UPS Top Management | RayHaber | raillynews
HomeỤWAAmerica1 AmericaGbanwee na UPS Top Management
Gbanwee na UPS Top Management
25 / 03 / 2020 1 America, America, ỤWA, General, Ụzọ Awara Awara, Ụgbọ okporo ígwè Tire
mgbanwe na njikwa elu
gbasie (NYSE: UPS) Kọmiti Ndị Nduzi mara ọkwa na rue na June 1, a họpụtara Carol Tomé ka ọ bụrụ onye isi nchịkwa UPS (CEO). David Abney, onye na-arụ ọrụ ugbu a dị ka Onye isi oche nke Board na General Manager, ekwuputala na ọ bụ Onye isi oche nke Kọmitii Nhazi na 1 June. Abney, onye ga-ala ezumike nka na Kọmitii Ndị isi UPS na Septemba 30, ga-aga n'ihu dịka onye ndụmọdụ onwe ya rue ngwụcha afọ 2020 iji wee gafee oge ntụgharị ahụ wee rụchaa oge ọrụ. Na njedebe nke oge a, ọ ga-ala ezumike nká site n'ịmecha ọrụ afọ 46 ya na UPS. Ruo Septemba 30, Onye isi nchịkwa onye isi UPS William Johnson ga-abụ onye isi oche nke Executive.
Johnson, onye na-arụkwa ọrụ dị ka Onye Isi oche Onye Isi oche na Kọmitii Ọchịchị na Onye Isi Kọmitii Executive, kwuru, “Mgbe usoro nhọpụta siri ike gụnyere ndị sonyere ma n'ime ụlọ ọrụ ma n'èzí ụlọ ọrụ, anyị mere mkpebi doro anya na Carol. Dị ka otu n'ime ndị isi a na-akwanyere ùgwù ma nwee ikike na azụmahịa ụwa America, Carol bụ aha pụtara ìhè na-eduga uto ụwa, na-ebuli ọnụ ọgụgụ onye nwe ya, mmepe nke talent na imezu ihe ndị dị mkpa.
Johnson, onye bụ onye so na Board na Onye isi oche nke Supervisory Board, nwere ihe omimi miri emi banyere usoro azụmahịa, atụmatụ, na ndị ọrụ UP, ọ bụkwa onye njikwa kwesịrị ekwesị iji duru ụlọ ọrụ ahụ na mgbanwe mgbanwe a dị mkpa, "Johnson kwuru. Anyị na-ekele David maka ọrụ ya dị egwu na UPS. O weere nzọụkwụ obi ike iji bulie UPS n'isi ụlọ ọrụ njem, wee jisie ike dobe ụlọ ọrụ ahụ maka ọdịnihu ga-aga nke ọma site na-agbado usoro ebili nke ụlọ ọrụ ụwa na ndị ọrụ. "
David Abney kwuru, "UPS abụwo otu n'ime agụụ mmekọahụ m na ndụ a, na ekele maka UPS, enwere m nrọ ndị America. Obi dị m ụtọ na ịkwadebe ụlọ ọrụ a dị mma maka afọ 100 ọzọ, na-arụ ọrụ na ezinụlọ UPS. Obi siri m ike na ndị otu nchịkwa UPS ga-ebu ikike anyị ruo n'ọdịniihu na ikike ha nwere. Oge eruola ka m nyefee ọkọlọtọ. Enwere m obi ụtọ dị ukwuu maka ozi nhọpụta nke Carol; Amaara m na ọ bụ ya bụ onye kachasị mma ịme ụlọ ọrụ a. Ọ bụ onye ndu nwere atụmatụ maara ihe ọdịnala ya na ụkpụrụ ya, ma na-enye onye ahịa ya ihe kacha mkpa.
N'ịkwadebe iweghara oche CEO, Carol Tomé kwuru, sị: “Ana m atụ anya izute atụmanya nke ndị ahịa anyị na ndị ọrụ aka site na isoro ndị otu njikwa ọrụ na ndị ọrụ 495.000 nke ụlọ ọrụ anyị na-emeziwanye onwe anyị. David rụrụ ọrụ mgbanwe pụrụ iche na UPS; Akpara m ịgbakwunye ndị ọhụrụ na ihe ịga nke ọma ya. N'iburu n'uche ọdịbendị ọgaranya nke UPS na mkpebi siri ike maka ụkpụrụ ya, anyị ga-anọgide na-eduzi ụlọ ọrụ ahụ ma na-eto eto na ntọala siri ike nke ụlọ ọrụ anyị. ”
Carol Tomé, onye isi 113th nke UPS, onye nọrọ kemgbe afọ 12, nọ na-arụ ọrụ dị ka onye so na Kọmitii UPS kemgbe 2003, na-arụ ọrụ dị ka Onye isi oche nke Supervisory Board. Tomé, onye bụbu onye na-esote onye na-esote onye isi oche na CFO na The Home Depot, onye na-ere ahịa ụlọ kachasị ukwuu na United States, yana ngalaba 2.300 na ndị ọrụ 400.000, weere ọrụ dị na atụmatụ ụlọ ọrụ, ego na mmepe azụmahịa, wee rụọ ọrụ dị ka CFO ruo afọ 18. N’oge ahụ, o nyere aka na-abawanye ọnụ ahịa ngwaahịa ụlọ ebe ana - ere ụlọ jiri pasent 450.
N’oge onye ndu Abney, onye a họpụtara dịka onye isi oche n’afọ 2014 yana Onye isi oche na Board n’afọ 2016, UPS;
Na mgbakwunye na ịba ụba ntụgharị ya na 27% na uru ụgbụ ya ruru ihe dịka 50%, o bukwanyere ụgwọ ọrụ ya n'otu ụzọ dịka ihe dịka 60%.
Site n'inweta ndị mgbapụta ma kesaa ndị ahịa, o wetalarị $ 29 ijeri na ndị na-ekenye ya.
Site na mmejuputa atumatu mgbanwe nke otutu afo nke ahutara n’iburu uzo iburu uzo agha, ikike ndi oru nke United States riri elu karie na 2019.
O buliela ikike netwọkụ ụwa zuru ụwa ọnụ nke ukwuu, na-arụpụta ihe karịrị nde mbugharị ngwugwu mkpọtụ kwa ụbọchị na 2019 n'oge oge kachasị elu.
Site na ịmalite UPS Flight Forward, ọ natara nkwado zuru oke maka ụgbọ elu mbụ na-agba ọsọ drone site na FAA.
O meela ka ihe dị iche iche dị na ụlọ ọrụ ahụ site n'ịgbanwe usoro nke Board of Directors na otu ndị isi njikwa.
Abney, onye bụbu onye na-esote onye na-esote onye isi ndị ọrụ (COO) kemgbe 2007, nwere njikwa ọrụ, nkwado na usoro injinia, yana ọkwa niile nke netwọ ụgbọ njem UPS. Tupu oru ya dika COO, o duziri ụzọ dị iche iche iji mee ka ikike ụlọ ọrụ ụwa niile dị ka Onye isi ala UPS International. O tinyekwala aka na ọtụtụ nnweta zuru ụwa ọnụ ma jikọta ọnụ n'oge ọrụ ya, dịka Coyote, Marken, Flọ ọrụ Fritz, Sonic Air, Stolica, Lynx Express na Sino-Trans na China. Amalitere ọrụ ya na UPS na 1974 ka ọ gara n’ihu agụmakwụkwọ ya na Mahadum Delta State, Abney buru ụzọ rụọ ọrụ dịka onye ọrụ njikwa ngwungwu n’obere ụlọ ọrụ na Greenwood.
Ntughari aka na UN Ro-Ro Management
Ndị ọkwọ ụgbọala na-agbanye ọkụ na-eti ọzọ
Ugbua na-agbasawanye ọrụ ụgbọ okporo ígwè China-Europe
Nwee ọghọm na - abụ ihe kacha mma na - arụ ọrụ na njirimara ndị ahịa
Ebube na-ebu ibu, 125 Pre-nyere iwu Tesla Electric Truck
UPS Na-etinye ego na Istanbul New Airport
Gbanwee na Palandöken Ski Resort Customization
Mgbanwe abụọ dị na ụzọ ụgbọ okporo ígwè Bursa
Bus na minibus na Eskisehir n'ihi ọrụ ndọtị ụgbọ ala…
Mgbanwe Mmasị na Tram Line Project na Eskisehir
'Ngbanwe mgbanwe' na Eskişehir Tram Line
Gbanwee na njem njem ọha na eze na Taksim | Square Taksim
Gbanwee na njem njem ọha na eze na Taksim